Matanho anodiwa kunyoresa se freelancer | Ehupfumi Zvemari
Matanho ekunyoresa se freelancer
Susana Maria Urbano Mateos | | Noticias
Muchiitiko chekuti rimwe basa rinobhadhara rinowanzoitwa zvakananga uye pacharo, Zvinenge zvakakodzera kuti munhu ane basa rekunyoresa muRegional Regime yeVanozvishandira Vashandi (RETA).
Zvakaenzana uye zvichidaro zvinofanirwa kuburitsa misiyano yedata rako muzviitiko zvinoitika, kutaurirana kubviswa kana zvasarudzwa kumisa chiitiko ichi.
Kunyoreswa uku kuchave kwakasarudzika uye hazvina basa kuti rinopfuura rimwe basa rine chekuita neRETA rinoitwa.
Isu tinotsanangura mune ino chinyorwa matanho kana maitiro, pamwe nezvimwe zvinyorwa zvekubata kukudziridza wega-kuzvishandira kunyoresa maitiro.
1 Pamusoro muPfuma
2 Yakakwirira kuchengetedzeka munharaunda
3 Kunyoresa muTown Hall
4 Kunyoresa nemasangano evashandi
5 Kunyoresa muKuzvishandira-wega neFlat Rate
6 Maitiro pane hacienda
7 Maitiro "Kuchengetedzwa Kwemagariro"
9 Bhalisa Pamhepo
Maitiro ekutanga anofanirwa kuitwa ndeekunyoresa neHaimari usati watanga chiitiko ichi. Kune izvi, chirevo chekuverengwa kwevanhu (mhando 036 na 037) chinofanirwa kuunzwa, mune iro iro iro iro rega data richaziviswa, chiitiko icho munhu achange achibata, nzvimbo yebhizinesi pamwe nemitero inofanirwa kubhadharwa.
Pachiitiko chega chega kuti idzi dhata dzinochinjwa, iyo muenzaniso 036 kana 037 pamwe nekugadziriswa.
Muenzaniso 037 Ichave iri yakadzikiswa vhezheni yeiyo 036 iyo inogona kunge ichishandiswa nevanenge vese vanozvishandira. Kunze kwekunge, semuenzaniso, avo vane masimba akasarudzika eVAT kana akaverengerwa mukati mevanhu-rejista yekushanda, sezvo achigona kuunzwa nevanhu vese venyama vane basa reNIF uye umo kero yavo yemari inopindirana neyeye manejimendi manejimendi. ivo havana kuverengerwa mune dzakakosha VAT hurumende.
Izvi kunze kwekureruka, zvipfuyo, zvekurima, hove kana zvakaenzana, uye havazi mune rejista yekudzosera yemwedzi (REDEME), yemakambani makuru, kana emukati-enharaunda vashandisi.
Panguva yekuzivisa chiitiko ichi, uchafanirwa kusarudza imwe yeiyo zvikamu zve (IAE) Zvehupfumi Zvekuita Mutero , iyo inodzorwa muRoyal Mitemo Yemutemo 1175/1990, uko kwakazara rondedzero yezvose zviri zviviri zvehunyanzvi uye zvebhizinesi zviitiko zvinoonekwa.
Chinhu chakajairika ndechekuti iwe wakasununguka kubhadhara iyo IAE, iwe unofanirwa kunge uchingobhadhara chete muchiitiko chekuita kubhadharira pamusoro pemiriyoni imwe mairi pagore. Kana isina kubviswa, iyo modhi 840/848 ichafanirwa kuiswa.
Yakakwirira kuchengetedzeka munharaunda
Mumazuva makumi matanhatu chiitiko chisati chatanga, iwe unofanirwa kunyoresa mune Inokosha Regime yeVanozvishandira Vashandi (RETA) yeSocial Security. Asati a2018, mamiriro ekuchengetedza aive akasiyana: munhu aive nemazuva makumi matatu ezvekarenda kuti kunyoreswa neRETA kugone mushure mekunyoreswa kuHaimari.
Kune izvi, iyo TA0521 fomu ichaunzwa muSocial Security manejimendi neID "Photocopy" kana yakaenzana uye kopi yekunyoresa neHurumende.
Yenzvimbo yemidziyo, unofanirwa kunge uine kopi yechibvumirano chakasainwa pakati pevamwe vemunharaunda, uye kana iwe wakanyoreswa semubatsiri munharaunda, gwaro rebumbiro rayo (rekutanga uye kopi).
Kune izvi, fomu TA0521 ichafanirwa kuunzwa mune imwe yeSocial Security manejimendi pamwe nekopikopi yeiyo DNI kana yakaenzana uye kopi yekunyoreswa neHurumende.
Kana munhu anyoreswa, chawo mupiro uye kufukidza zvinotsanangurwa nezvavachaita.
Tichifunga nezve mirau mitsva yekuzvishandira kushaya basa, zvinogona kuitirwa zviitiko zvengozi dzebasa nezvirwere zvepamabasa, zvakare nekushaikwa kwemabasa, kunyange izvi zvingave 2,2% kupfuura mupiro.
Mune zviitiko zvepamusoro zvine njodzi, semuenzaniso, chikamu chekuvaka, zvichave zvinomanikidzwa kupa kune zvinongoitika zve tsaona dzebasa, zvakare nezvirwere zvepamabasa.
Kunyoresa muTown Hall
Pachave nemvumo kubva kuCity Council kuti ikwanise kuenderera nekuvhurwa kwenzvimbo umo chiitiko chehupfumi chichaitwa. Rezinesi rekuvhura ichi mvumo. Kazhinji, bato rinofarira richafanirwa kutumirwa kunosimudzira manejimendi kudhipatimendi rekuronga kwemaguta kana nzvimbo.
Mutengo weiyi rezinesi uchaverengerwa zvakanangana nenzvimbo uchifunga zvinhu zvitatu: Kukura kwenzvimbo iri kutaurwa, mhando yechiitiko chinofanirwa kuvandudzwa uye kukosha kwekutengesa kwemugwagwa.
Mumataundi mazhinji, semhedzisiro yekunonoka kupihwa mvumo yemalayisensi, inowanzotanga kushanda kana chikumbiro chaendeswa. Kunyanya kuve nechokwadi chekuti bato rinofarira rinosangana nezvose zvinodiwa kuti chiitiko chiri kutaurwa chiitwe, zvikasadaro munhu anomanikidzwa kuvhara, kana kugadzirisa zvinoshomeka zvinoonekwa, nekwaniso yekugamuchira imwe mhando yefaindi.
Kugona kuvandudza mabasa ekugadzirisa kana kugadzirisa nzvimbo, rezinesi reMabasa rinenge richidikanwa, inova mvumo yemaguta. Kazhinji ichagadziriswa pamberi pebazi rekuronga remaguta
Kunyoresa nemasangano evashandi
Iwe uchave uine musengwa wekuzivisa vane hunyanzvi hwevashandi masimba, kungave kuvhura, kumisikidza, kuendesa kana kuwedzera nzvimbo dzebasa; kazhinji kudhipatimendi rezvevashandi reMinistry of Employment kana Labor of the Autonomous Community iri mubvunzo.
Ichi chisungo chinowedzera kusvika pakutangazve kwechiitiko mushure mekuchinja kwakakodzera, kuwedzeredzwa kana shanduko. Pachave nemazuva makumi matatu ezuva reizvi, zvichidikanwa kuti upe data uye ruzivo rwakanangana nenzvimbo yebasa uye vashandi vebhizinesi.
Bhuku Rekushanyirwa rakabviswa kubva muna Gunyana - 2016, iro raivapo uye rakatsiviwa nemaitiro akanyorwa uye notisi, kunyanya nenzira dzemagetsi, dzinogona kuitwa nevaongorori vevashandi pakushanyira makambani.
Kubva Chikunguru - 2015 maitiro aya akange asisiri kushanda kune vatsva vanozvishandira, zvakafanana kumakambani.
Kunyoresa muKuzvishandira-wega neFlat Rate
Izvo zvinokwanisika kukumbira kubva kutanga kwe2018 iyo nyowani mwero wevatengesi mahara, ino ye50 euros kwemwedzi gumi nemaviri, kusiyana nemwedzi mitanhatu yapfuura, ine mamiriro matsva ekukumbira iyo.
Iyi mwero mutero pamutero uyo munhu anozvishandira anozofanira kubhadhara mumakore avo ekutanga ebasa. Panzvimbo peye 275 euros shoma mubhadharo, neiyo Flat Rate iwe unenge uchingobhadhara makumi mashanu euros mukati memwedzi gumi nembiri yekutanga.
Mushandi nenzira iyi anogona kunge ari kuchengetedza mari inodarika zviuru zviviri nemazana mashanu emadhora muSocial Security mipiro, achizvifunga iye uye aine rubatsiro uye anovimbiswa sekunge ari kutora nhanho yakajairwa.
Iyi nzira yekunyoresa pachiyero ichi ichave nezvikamu zviviri: Kunyoresa neRevenue Agency uyezve neGeneral Treasure yeSocial Security.
Maitiro pane hacienda
Iyi nzira yemafambisirwo ichaitwa kumahofisi e Tax Agency kana kubva pa internet (ine digiti yedhijitari kana yemagetsi DNI).
Uchishandisa "kunyoreswa kwecensus", Mutero Agency inozoziviswa kuti basa rehunyanzvi riri kutaurwa richange richitanga.
Chichava chirevo apo panoratidzwa data yakanangana nekambani kana vanozvishandira, vachitsanangura chiitiko chichaitwa, maratidziro ane chekuita nenzvimbo yebhizinesi, chiitiko chehunyanzvi, pamwe nehutongi hutongi hunoshuviwa, ingave general kana chakareruka.
Pachave nesarudzo mbiri zvichibva nekuti chiitiko ichi chichaitwa semunhu anozvishandira, kureva kuti, munhu chaiye kana semunhu ari pamutemo, zvichibva pane izvi, kuziviswa kwecensus kwakakodzera.
Maitiro "Kuchengetedzwa Kwemagariro"
Maitiro aya achaitwa pamberi pe (TGSS), General Treasure yeSocial Security.
Kana zvese chitupa chekuverenga uye kunyoreswa muEconomic Activities Mutero zvave kuwanikwa, iko kubatana uye kunyoreswa mu (RETA) Special Regime yeVanozvishandira Vashandi kunoenderera.
Maitiro aya achaitwa kuGeneral Treasury of Social Security kana kuburikidza neInternet (chitupa chedigital kana DNI yemagetsi inodiwa)
Iyo mhando TA 0521, Iripo neakasiyana maratidziro zvichienderana nemamiriro ezvinhu akasarudzika.
Pane zvipingaidzo zvekuwana ichi chiyero chakapetana, Izvo zvinodikanwa kuti unzwisise kuti havazi vese vakanyoreswa neRETA vanozogona kubatsirwa nazvo.
Paunopfuurira kunyoresa, magwaro achazoratidzwa, ese ari maviri mafotokopi uye emavambo ayo chokwadi cheicho chimwe chicha simbiswa.
Kunyoresa muEconomic Activities Mutero, modhi 840
DNI kana NIE
Kunyoresa mune yehunyanzvi kuverenga, mhando 037
Kana iwe wanga uchishandira mumwe munhu zvisati zvaitika, iwe unofanirwa zvakare kuratidza yako Yemagariro Kuchengetedzwa kadhi kadhi.
Ivo vanhu vanofanirwa kunyoreswa kuti vaite chiitiko ichi, vanofanirwa kupa Chitupa chesangano revanyanzvi.
Izwi rekuti uchange uchikumbira kunyoreswa muRETA richava mazuva makumi matatu kubva mukutaurirana zvine chekuita nekutanga kwechiitiko ichi kuenda kune Mutero Agency, nenzira yekunyoresa muhunyanzvi hwevanhu. Kubhadharwa kwemubhadharo wega-wega kunozoitwa pamwedzi kuburikidza nemabhangi akanangana.
Iyo PAE (Pfungwa dzeKuteerera kune Muzvinabhizimusi), yakasimbiswa neBazi reEconomy neindasitiri Ivo vanokwanisa kugadzirisa kuburikidza neinternet kunyoreswa kwemunhu anozvishandira kuburikidza neiyo DUE (Yakasarudzika Yemagetsi Gwaro), iyo icharerutsa manejimendi, kukwanisa kuendesa kunyoreswa pamhepo panguva imwe chete muHaimari neSocial Security.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Noticias » Matanho ekunyoresa se freelancer
Yakagadziriswa kana kusiyanisa mwero regeji?
Volatility imwe nzira yekudyara